Wasiir ku xigeenka Dastuurka oo ka warbixiyay shirkii odayaasha dhaqanka uu kula yeeshay Cabudwaaq – Radio Muqdisho
Wasiir ku xigeenka Dastuurka oo ka warbixiyay shirkii odayaasha dhaqanka uu kula yeeshay Cabudwaaq
Wasiir ku xigeenka dastuurka Cabdullaahi Yuusuf Alankeey,ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee degmada Cabudwaaq ay aqbaleen inay ka qeyb galaan shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Dhexe.
Mudane Alankeey oo ku sugan Cabudwaaq ayaa Radio Muqdisho u sheegay in wada-tashiyo u dhaxeeyay odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiin ka socotay dowladda oo uu hoggaaminayay wasiirka gaashaandhigga laga gaaray heshiis, ayadoo odayaashu dhaqanku ay aqbaleen inay shirka ka qeyb galaan.
Masuuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan xildhibaano ayaa ku sii jeeda Cabudwaaq si loo sii wado wada tashiyada loogu diyaar garoobayo shirka maamul u sameynta gobollada dhexe.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in shirka maamulka loogu sameynayo gobollada dhexe uu ka furmi doono degmada Cadaado, ayadoo dhammaan bulshada degta Mudug iyo Galguduud ay ka qeyb gali doonaan si loo dhiso maamul loo dhan yahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa waqti badan ku bixinaysa dhammaystirka maamullada gobollada si loo dhaqan galiyo nidaamka federaalka isla markaana loo diyaariyo hannaan suurta galiya in doorasho laga qabto waddanka sanadka 2016-ka.
Bandhig Dhaqan oo ay ka qeyb galeen masuuliyiin dowladda ka tirsan oo Muqdisho lagu qabtay “SAWIRRO”
UNHCR oo qaxootiga Yemen ka imaanaya xerooyin uga dhisaysa Jabuuti iyo Soomaaliya